Vaovao - Ahoana ny fomba fampiharana ny zezika azo zezika rano
Fomba fampiharana ny zezika azo zezika amin'ny rano ara-tsiansa
Fotoam-piterahana Rehefa manondraka sy manisy zezika, ny mari-pana amin'ny rano dia tokony ho araka izay azo atao amin'ny mari-pana sy ny mari-pana amin'ny tany, ary aza tondraka ny rano. Manondraka ny trano fandraisam-bahiny amin'ny ririnina, manandrana manondraka amin'ny maraina; amin'ny fahavaratra, manandrama manondraka amin'ny tolakandro na hariva. Raha tsy mila rano mitete ianao dia miezaha manondraka rano kely araka izay tratra.
Ny tondra-drano be dia be dia be ka mahatonga ny fifangaroan'ny tany, voasakana ny fisefoana amin'ny rafi-pitabatabana, misy fiantraikany amin'ny fifoka ny otrikaina, ary mora ny lo sy ny hazo maty. Ny fampiroboroboana ny "fambolena ridge" dia miteraka vokatra avo.
Ny zezika tsy voavahan-drano dia tsy mahazo afa-tsy vokatra sy kalitao mety amin'ny alàlan'ny fambolena siantifika. Ny zezika siantifika dia tsy momba ny fomba fizarana sy ny kalitaony ihany, fa ny fatra ara-tsiansa ihany koa.
Amin'ny ankapobeny, 50% amin'ny zezika azo vonoina amin'ny rano no ampiasaina amin'ny legioma an-tanety, ary ny isan'ny per mu dia 5 kg, miampy 0,5 kg asidra humika azo ovaina amin'ny rano, asidra amine, chitin, sns. azota azota, fosforôra ary potasioma, izy io koa dia afaka manatsara ny fanoherana ny aretina, ny fanoherana ny haintany, ny fanoherana ny hatsiaka ary mampihena ny fisehoan'ny tsy fahampiana.
Teknolojia fampiharana siantifika azo zezika rano
Ny fakana ny voly legioma toy ny kôkômbra sy ny voatabia ohatra, ny kôkômbra sy ny voatabia dia voly mamelana, miteraka ary mioty. Araka ny fitsapana nataon'ny Minisiteran'ny Fambolena, ny famokarana kôkômbra 1000 kg dia mitaky azota 3 kg, pentoxide phosforus ary 1 okidasiôna. Potasioma 2,5 kg, oksidia calcium 1.5 kg, oksida manezioma 0,5 kg.
Ny kôkômbra, ny voatabia ary ny voly hafa dia manana zezika azota betsaka kokoa ho an'ny fitomboan'ny zavamaniry aloha, ary ny fôsforôra sy ny borona dia tsy tokony ho tsy ampy mandritra ny voninkazo. Mandritra ny vanim-potoanan'ny voankazo, ny habetsaky ny potasioma sy ny kalsioma dia tokony hampitomboina, ary ny zezika manezioma dia tokony ampidirina amin'ny dingana afovoany sy tara. Midika izany fa ny fifandanjana ny otrikaina dia tokony ho tratra mandritra ny fotoana fitomboana iray manontolo.
Raha ny fahaizana mifandanja amin'ny otrikaina, dia tokony hifantoka amin'ny fampiasana voajanahary koa ny zavatra organika azo vahana amin'ny rano, ao anatin'izany ny fampiasana zezika entona gazy karbonika.
Halaviro ny fanosehana mivantana ary ampiasao fanosehana faharoa. Ny zezika tsy voavahan'ny rano dia misy atiny mahavelona be kokoa noho ny zezika marobe, ary somary kely ny fatra. Ny famafazana mivantana dia mety hahatonga ny zana-ketsa may hanimba ny faka sy ny zana-ketsa malemy. Ny fanalefahana faharoa dia tsy mahasoa fotsiny ny fampiharana zezika amin'ny zezika, fa manatsara ny fampiasana zezika.